I-4 I-Best Miltern Lanterns Yokuthenga - Ukukhetha Okuphephile
Izipesheli kanye namakhuphoni
 I-4 I-Best Miltern Lanterns Yokuthenga
amathoshi Military noma Tactical bulethe izinzuzo eziningi kuya amathoshi evamile LED, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa ukwakhiwa yalo, kodwa futhi imisebenzi eminingi enikeza Umbuso onolwazi lempi ie ezemidlalo (isib. Airsoft), ubusuku ukuzingela kanye neminye imisebenzi.
Kulesi sihloko sikhethe ngokucophelela i-4 Best Military Lantern namaTactics okuzoyithenga.
Amakhanni aseMpi Nezocingo
Hlangana ne-Klarus XT11GT enamandla kakhulu ye-flashlight yezempi yama-flashlight egqoke emzimbeni we-aluminium ngokukhanya okucacile kwe-2000 lumens nokugxila kwebanga elidlula i-300m!
Isekela 3 izindlela Tactical (okukodwa Strobe, omunye-Touch okuphansi futhi okukodwa Turbo), isekela izikhali ukuthi akufanele sedlule ububanzi 1 ''.
It 18650 nge amabhethri elishajekayo kanye CR123A ngaphandle lokhu flashlight amabhethri abe nesisindo 130gr 142.6mm nge obuphelele okwenza kube Ikakhulukazi le flashlight kuyinto 3 abe nezilungiselelo elahlukile ukushintsha okusheshayo.
I-IPX8 iqinisekisiwe, ibambelela kumamitha angu-2 ngaphansi kwamanzi, ngaleyo ndlela yenza i-flashlight esekela izimo ze-harshest.
Eminye imisebenzi ezithakazelisayo yinkomba yebhethri nokuxhumeka kwe-micro-usb.
Thenga i-Klarus XT11GT
Enye yezinkomba emakethe uma kuziwa izibani lempi, eyenziwe ebangeni wezempi aluminium umzimba nge 135mm obuphelele nesisindo 100gr, ngokuya kwamandla kukhona 1100 lumens okukhipha ngokugxila kude 200m 250m.
Iqukethe inkinobho rotary 360graus, okuyinto kusiza Ukuhwebelana entres izindlela ukukhwezwa ngokushesha lesi sikhali ne isiqeshana, ungafaka iringi Tactical ku ukushintshela ku izinguquko okusheshayo kunoma iyiphi simo, wahlanganisa inkinobho blocker evimbela ngephutha isebenze idivayisi.
Ibhethri ngu-3600 mah futhi isekela ngokuqondile ngokulayishwa ngokuqondile nge-micro-usb, inombonakaliso enikeza ulwazi mayelana nesimo samanje sebhethri.
Uma wehlile emanzini, akukho ukukhathazeka, isitifikedi se-IPX8 esibambelele ku-2m ejulile.
Ukwakhiwa kwe-flashlight kuvumela ukushisa okukhulu kokushisa, futhi ukumelana namazinga okushisa aphansi, uma ungabaza ungakwazi njalo ukuhlola efrijini lakho lasekhaya.
Thenga i-CooYoo HadronZ
Enye imodeli ephumelelayo ye-brand Niteye, lokhu kukhanya kwamuva kwezempi ye-flashlight kunezici ezimangalisayo.
Isakhiwo sensimbi sinekhwalithi ye-aeronautical aluminium, evumela ukuthi imelane nokuwa kuze kufike i-1,5m (idatha yomaki).
I-LED CREE XP-G Sawubona, ingabe kusimangaze amandla okukhipha 1080 lumens, focus ifinyelela kude kalula 400m.
Usekela izindlela ze-5 zokusebenza (i-Turbo, High, Medium, Low neStrobe).
Ukushaja kungenziwa nge-micro-USB (amabhethri 16850 no-CR123A), uma uthenga amabhethri awafakiwe.
I-flashlight nayo inesibonakaliso esimweni samanje sebhethri.
Isisindo ngu-130gr ngesilinganiso esilandelayo:
Ubude: cm 15.2
Leli flashlight liqinisekisiwe i-IP-X6, libhekene nokugezwa kwamamitha angu-2.
Akungabazeki flashlight ekahle amasosha, onogada namaphoyisa, ngamandla 27500cd, iphoyisa usebenzisa flashlight e strobe angasayindwa thwebula okwesikhashana nombaleki uma lokhu bheka ngqo lens.
Thenga iNiteye MS-R28
A pefeita lihambisana izinga nentengo nge ngenani ethengekayo kunalena eyedlule, esikuthola ezincwadini lokhu flashlight ezempi kanye iqhinga ukusetshenziswa LED Cree XM-L2 nge okukhipha amandla 800 lumens kanye ukukhanya 11100 cd.
nokugxila kwawo ibanga ongafinyelela phakathi 200-300m, umelana imithelela 1.5m sibonga ayo izinga Aerospace aluminium Uhlaka, uma usebenzisa kwimodi okusezingeni eliphezulu (800 lumens) Kungase kudingeke ukusetshenziswa 4.5h okuqhubekayo ngaphandle kokuphazamiseka.
Amabhethri asekelwa yi-16850 no-CR123 (awafakiwe).
Njengabo bonke abanye izibani amasosha, gqamisa lokhu model yiyona Strobe NGOMUMO, nganoma iyiphi indlela kuyinto (Phezulu, Maphakathi, okuphansi), ungakwazi ngokushesha kusebenze imodi strobe, okuwusizo kakhulu amaphoyisa.
I-flashlight ayinamanzi, isitifiketi se-IP-X8, sinamamitha angu-2 ejulile.
Thenga i-Nitecore P20
Ngakho saqeda uhlu olufushane mayelana nokukhetha kwethu kwe-flashlight ye-4 namaqhinga futhi iyiphi i-flashlight ongayincoma? Shiya impendulo
 I-15 Best Smartphones kuze kufike ku-250 € (Ikhwalithi / intengo)
I-10 Best Tablets Yokuthenga
 I-10 Best Smartwatches ye-Android ...
 TOP 10 Izesekeli Nge-Smartphones
[TUTORIAL] Funda ukuthi Ungalanda kanjani amavidiyo we-Youtube [10 ...
 5 Best Vacuum Cleaners Robot (ikhwalithi / intengo)
Thenga i-Xiaomi Mi6 (32 / 64GB + 6GB RAM)
 Ungaba kanjani i-2 WhatsApp ku-Android
Shiya amazwana resposta Cancelar
I-copyright 2017 Khetha Okuphephile | Wonke Amalungelo Agodliwe | Mayelana nathi | Xhumana nathi | Inqubomgomo Yemfihlo